किसानसम्म अझै पुगेन गरिमा धानको क्षतिपूर्ति – Chitwan Post
भरतपुर । चितवनका स्थानीय तहमा नक्कली गरिमा धानको क्षतिपूर्ति आएको झन्डै एक महिना हुनलाग्यो, तर अझै किसानको हातमा क्षर्तिपूर्ति पुग्न सकेको छैन । नक्कली बीउका कारण बाला लाग्न नसकेको गरिमा धानबाट पीडित कृषकलाई सरकारले लागत मूल्यको २० प्रतिशत राहत स्थानीय तहमा पठाएको छ । चितवनका पाँच नगरपालिकाका किसान नक्कली गरिमा धानबाट पीडित छन् ।
चितवनसहित १३ जिल्लाका १७ हजार ८०६ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको सो जातका धानका कारण रू. १७ करोडबराबरको लागत खर्च नोक्सान भएको थियो । त्यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य रू. २३ करोड रहेको छ । तत्कालका लागि सरकारले लागत मूल्यको २० प्रतिशत राहत स्थानीय तहलाई पठाएको हो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका प्रमुख राजन ढकालका अनुसार जिल्लामा नक्कली गरिमा जातका धान लगाएका चितवनका सबै स्थानीय तहमा रकम आइसकेको छ । स्थानीय तहले वडामार्फत रकम वितरण गर्ने जनाएका छन् । तर, किसानको हातसम्म रकम कहिले पुग्ने हो अझै अन्योल छ । स्थानीय तह रकम वितरणको प्रक्रियामा रूमल्लिएका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकामा गरिमा धानबाट पीडितको क्षतिको २० प्रतिशत रकम आएर बसेको छ, तर वितरण भएको छैन । भरतपुर महानगरपालिका गरिमा धानपीडित किसानको लागि २० लाख २९ हजार रूपैयाँ आएको छ । महानगरका कृषि शाखा अधिकृत विनोद लामिछानेले पीडित किसानलाई प्रतिकट्ठा ६०३ रूपैयाँको दरले वितरण गर्ने बताए । उनले भने, ‘रकम वितरणको अन्तिम तयारीमा छौँ ।’
राप्ती नगरपालिका प्रमुख प्रभा बरालले तत्काल वडा कार्यालयमार्फत वितरणका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएकी छन् । उनले रकम वितरण पनि सुरू भइसकेको दाबी गरिन् ।
यस्तै, माडी नगरपालिकामा गरिमा धानपीडित किसानको लागि १४ लाख रूपैयाँ आएको छ । माडी नगरप्रमुख ठाकुर ढकालले प्रतिकट्ठा ६१९ रूपैयाँको दरले किसानलाई वितरण गर्ने बताए । उनले भने, ‘एक दुई दिनभित्रै किसानको हातहातमा रकम पु¥याउँछौँ ।’
यसैगरी रत्ननगर नगरपालिकामा पीडित किसानको लागि १९ लाख रूपैयाँ आएको छ । रत्ननगर नगरप्रमुख नारायण वनले वडास्तरमा
भीडभाड नहुने गरी रकम वितरण गर्ने बताए । उनले भने, ‘कोरोनाको प्रभावले केही ढिला भएको छ, अब छिटै किसानलाई रकम दिन्छौँ ।’
खैरहनी नगरप्रमुख लालमणि चौधरीले वडास्तरमा रकम वितरण गर्ने बताए । उनले भने, ‘वितरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको छ, एक–दुई दिनमा रकम वितरण हुन्छ, भीडभाड कम गर्नलाई वडाबाट वितरण गर्न लागिएको हो ।’ कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित राहत रकमबाटै कृषकलाई रकम पठाइएको हो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनले दिएको जानकारीअनुसार लागतका आधारमा जिल्लाको राप्ती नगरपालिकाको छ हजार ४० कट्ठा क्षेत्रफलको रू. दुई करोड १९ लाख ५५ हजार २३८, खैरहनीको चार हजार १११ बिघामा रू. एक करोड ४९ लाख ४६ हजार ४७७ क्षति मूल्याङ्कन भएको छ ।
यसैगरी, रत्ननगर नगरपालिकामा तीन हजार १३० बिघा क्षेत्रफलमा रू. ३८ लाख ८३ हजार ९६९, कालिका नगरपालिकामा एक हजार ६८ बिघा पाँच कट्ठाको रू. ३८ लाख ८३ हजार ९६९, भरतपुर महानगरपालिकाको तीन हजार १३० बिघामा रू. एक करोड १९ लाख सात हजार ३७२ को क्षति मूल्याङ्कन गरिएको छ । माडी नगरपालिकामा दुई हजार २९८ बिघामा रू. ८३ लाख ५३ हजार १६८ क्षति भएको छ । तत्कालका लागि सो रकमको २० प्रतिशतमात्रै किसानले पाउनेछन् ।
सबै वडामा यथाशीघ्र क्वारेन्टाइन बनाऔँ : प्रशासन
२५ लाखको खेलमैदान योजना : ८० लाख अनियमितताको आरोप !